Siro badan oo ka soo baxay dood lagu sheegay ictiraaf siin maamulka Somalilaan - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Waxa shalay ka dhacay barlamaanka Ingiriiska oo faaruqa dood la soo diyaariyay oo ay soo diyaariyeen xildhibaano sheegay inay xaafadooda degan yihiin bulsho ka soo jeeda qabiilka ISAAQA ama beesha dhexe oo ictiraaf ka raadinaya Ingiriiska. Inta la ogyahay ma jiraan bulsho ka soo beesha dhexe oo hadda u jajaban ama u buka ictiraaf.
”Ma jiraan bulsho hadda ka soo jeeda beesha dhexe oo dibedda joogta oo xafiisyo taga ma xildhibaano u taga oo yiraa ictiraaf na siiya, waayo waxay dhamaatay sheekadaas sanado hore ayuu yidh Xuseen Warsame.
”Waxa hadda ugu daran sidii ay maamulka ugu tuuri lahaayeen horjooge Muuse Handaraab ayuu raaciyay Xuseen Warsame. In sanado ahba layskuguma iman sheekadii 18 May, waxaan ugu dambaysay ugu yaraan 8 sanno.
Badankoodu waxay hadda u ololeeyaan sidii loo heli dawlad cadaalada oo dalka hanata waxayna aad u taageersan yihiin madaxweyne Farmaajo. Marka waxaad is weydiin kartaa maxay tahay dood ku sheega tobaneeyo xildhibaan oo badankood la yaqaano inay u doodi jireen xilliyo hore in la ictiraafo ay maanta ku dibiro dhacsadeen barlamaan faaruqa.
Haddaba dibiro dhacsiga qaar ka mida xildhibaanada Ingiriiska waxa ka soo baxay siro badan oo qaarkood ku socdaan Shiinaha iyo Ruushka iyo weliba hamiga ay ka leeyihiin Somaliya guud ahaan.
”Waan maalgashan karnaa maamulka Somalilaan sida dekeda Berbera, waxaan guran karnaa macdanta iyo dahabka buuxa, waxaan ilaalinaa xeebta Berbera, waxaan Hargeysa ka dhisnay wadooyin muhiima, waxaan siinaa barnaamijka horumarinta Somalilaan ayuu yidhi afhayeenka dooda diyaariyay oo ah wasiirkii hore ee difaaca ee Ingiriiska.
Waxay aad uga xanaaqeen in gaalo joogin Hargeysa iyo Burco, kuwa gaalada ee ay abuureena ay si hoose u caabudaan masiixiga, waxayna codsadeen intaas wax laga qabto loona sheego maamulka si degdega. Waxay ka xanaaqeen inaan haween la dooranin doorkii u dambeeyay, waxayna dalbadeen in wax laga bedelo.
Waxay ku celceliyeen mar haddaynaan inagu aqoonsan karin waa inaan raadinaa dal inooga hormara maadaama aan nahay ka labaad ee aqoonsan doona sida Kanada, wadamada Woqooyiga Yurub sida Dhanmaak iyo Noorway in lagala hadlo.
Ku darso Ingiriiska waa kan cunaqatayta hubka ku haya Somaliya ayadoo ujeedada ayna cidna ka qarsoonayn.